Voasivana Ny Media Sosialy Taorian’ny Vato Tokana Manohitra Ilay Filoha Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Marsa 2013 16:36 GMT
Niharan'ny sivana ny media sosialy Shinoa noho ny adihevitra mikasika ilay olona tsy fantatra nandatsa-bato tokana manohitra ny fanendrena ofisialy ny lehiben'ny kaominista Xi Jinping ho filoha.
Nandritra ny fandahatsa-bato miezinezina, araka ny efa nampoizina, voafidy ho filohan'i Shina tamin'ny vato 2.955 mankasitra azy sy telo tsy nifidy i Xi tamin'ny 14 Martsa 2013 nandritra ny Kongresy Nasionalim-bahoaka faha-12 ao Shina.
Noderain'ny fampahalalam-baovaom-panjakana ho nahazo vato be indrindra hatramin'ny vanim-potoana Mao Zedong ny filoha Xi . Tao amin'ny Weibo, nivezivezy tao ny amin'ny vaovao ifeng [zh] ny fampitahana ny vokatry ny latsa-bato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena taloha: Nahazo vatom-pitsipahana 35 i Jiang Zeming raha toa kosa ka telo ny vatom-pitsipahana azon'ny filoha vao niala Hu Jintao.
Mpisera Weibo iray “Zeng Langbo” naneho-hevitra [zh] tamim-pivazivaziana:
Mpanadihady vaovao “Laoxu Shiping” nanoratra hoe [zh]:
Mana-pahaizana sy mpanoratra malaza Wu Jiaxiang nanohy niresaka momba izany [zh]:
Nihevitra ireo mpiserasera sasany fa avy amin'i Xi ihany ilay vato manohitra. Sheng Dalin, mpanadihady vaovao ao amin'ny gazety Henan ao Dongfang Jinbao nanoratra hoe [zh]:
Nihevitra ihany koa ireo mpiserasera sasany fa natao fanahy iniana ilay vato manohitra mba hiteraka adihevitra. “yjhjerry” nanoratra hoe [zh]:
Mpisera hafa “MC-Mark_Flghter” nihevitra [zh] fa angamba nisy olona nanindry bokotra tsy izy .
Caixu kosa nanoratra [zh] fa tsy zava-dehibe ny fahafantarana izay nandatsaka ilay vato manohitra: